Mashiinka Induction, Seddex Waji Mashiinka Induction, Gawaarida Caddaynta Gawaarida - Leadrive
Shirkadda Zhejiang Leadrive Electric Motor Co., Ltd.(wixii hadda ka dambeeya oo loo yaqaan "Lijiu Motor") wuxuu ku yaal Taizhou, Zhejiang, oo ah salka dhaqaalaha gaarka loo leeyahay. Ku tiirsanaanta wareegga dhaqaalaha ee ballaaran ee Yangtze River Delta, deegaanka juqraafi ahaan ayaa ka sarreeya. Waxay 2 KM kaliya u jirtaa garoonka diyaaradaha Huangyan iyo 10 kiiloomitir oo u jirta Haimen Port. Gaadiidku waa mid aad u habboon. Iyada oo leh koox hoggaamineed oo cusub, nidaam maareyn casri ah, shaqaale tayo sare leh, tas-hiilaad wax soo saar oo dhameystiran, qalab baaris dhameystiran, xoog farsamo xoog leh, tayo wax soo saar la isku halleyn karo, tikniyoolajiyad wax soo saar heer sare ah, nidaam tayo fiican leh, horumarsan leh awoodda R & D iyo koox xirfadlayaal iib ah, Lijiu Gawaarida ayaa si dhakhso leh u noqday xiddig soo kordhaysa ee warshadaha gawaarida ee Shiinaha. Shabakada iibka ayaa ku fiday in ka badan 20 gobol iyo magaalooyin ku yaal Woqooyi-bari, Woqooyi-galbeed, Waqooyiga Shiinaha, Shiinaha Dhexe, Koonfurta Shiinaha, Koonfur-galbeed iyo Bariga Shiinaha. Sawirka sumadda ayaa si qoto dheer ugu qotomay quluubta dadka, wuxuuna ku kasbaday raalli ahaanta iyo ammaanta ganacsatada kala duwan.
Waxaan si Daacadnimo ah kuugu martiqaadeynaa inaad si wadajir ah u abuurto mustaqbalka! Qiimaha Wuxuu Ka Imaanayaa Abuurka!
Qiimaha tamarta ee lagu wado matoor koronto in ka badan toban sano waa ugu yaraan 30 jeer qiimaha asalka ah ee iibsiga. Iyadoo isticmaalka tamarta uu mas'uul ka yahay inta badan nolosha oo dhan, Marek Lukasz ...
Suuqa Gawaarida Asynchronous si kor loogu qaado dakhliga ...
Noocii ugu dambeeyay ee daraasadda suuqa 2020 ee Suuqa Asynchronous Motor oo ka kooban 103 oo leh miisaska xogta suuqa, jaantusyada, jaantusyada, iyo jaantusyada kuwaas oo si fudud loo fahmi karo iyadoo si qoto dheer loo soo bandhigay ...